Nitondra fitaovam-piadiana nikasa hanafika tanàna ireto jiolahy 8 lahy ka ny enina nifanehitra tamin’ny mponina maty tsy tra-drano fa ny roa tafaporitsaka. Ireto farany mbola nenjehina ary efa tratran'ireo fokonolona ka tsy mbola fantatra izay niafarany amin’ny fotoana nanoratana ny vaovao.
Nitondra basy mahery vaika
Basy mahery vaika sy zava-maranitra no norongoin’ireto malaso ireto. Nahitana basy poleta na pistolet 9mm iray efa voafahana bala, basy pistolet vita gasy iray, fanafody gasy miaraka amin’ny fonosana rongony, “cola valium” na “ody mampandry” iray fonosana mbola vaovao, antsy sy hety. Tratran’ny fokonolona amin’ny be no ho ny vitsy ka izao niafara tamin’ny famoizana aina izao. Naharitra ora vitsy ny fifanjevoana tao amin’ny fokontany Antanamandririry, kaominina Tsarabia, distrika Vohémar.
Raha ny loharanom-baovao azo avy amin’ny mpanao gazety any an-toerana, nikasa hangalatra lavanila izy ireto ka izao nifanehitra tamin’ny mponina tany an-toerana izao izay niaro ny tenany sy ny fananany. Araka ny fampitam-baovao any an-toerana, efa tofoka tanteraka ny halatra lavanila ireo mpamboly ary drodroky ny andrimasom-pokonolona. Reraky ny asa ny atoandro nefa tsy matory na indray mi-pimaso aza ny alina nandritra ny volana vitsy. Araka ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana any an-toerana, hampitaina amin’ny fotoana mahamety azy eto ihany ny tohin’ny fanadihadiana ity fiarovantenan’ny vahoaka ity manoloana ny fanafihana tanàna notanterahin’ireto dahalo ireto.